Isbeddelada xiisaha leh ee bisha Luulyo - Sharciga Ilaalinta Taranka ee Caafimaadka (RHPA) | Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church
Bishii Abriil 2020, Guddoomiyaha Northam wuxuu saxiixay Sharciga Ilaalinta Caafimaadka Taranka (RHPA) sharci - sharci kaas duub dib xaddidaadyo gaar ah oo la saaray bixiyeyaasha soo rididda ee Dawlada Dhexe ee Virginia ku dhowaad toban sano ka hor. Marinka RHPA ee loo maro Virginia House iyo Senate iyo guud ahaan miiska gudoomiyaha waa guul xaqiijineysa xuquuqda dadka uurka leh ee ku nool Virginia si ay go'aan uga gaaraan jirkooda iyadoon gobolka ka dhexeyn iyaga iyo xirfadlayaashooda daryeelka caafimaad. Anaga FCHC ahaan waxaan ku faraxsanahay inaan qeyb ka noqonay howsha si aan u xoojino muhiimada RHPA u leedahay sharci dejiyeyaasha iyo codbixiyaasha Virginia.
1da Luulyo markay RHPA dhaqan gasho, waxaan arki doonnaa nasashada xannibaadaha iyo fursadda lagu ballaarinayo helitaanka daryeelka ilmo soo rididda ee gobolka oo dhan. Waa tan waxa waan nahay rajeynaya FCHC:
Waxaan fursad u heli doonnaa inaan mudnaanta siino waqti dheeri ah iyo ilo dhaqaale oo ku saabsan daryeelka bukaanka. Dhowrkii sano ee la soo dhaafey, waa inaan ka boodno dhex-dhexaadyo gaar ah oo uu igmaday hay'adda sharci-dejinta ee gobolka sababo la xiriira shuruudo gaar ah oo lagu daray 2011. RHPA waxay dejineysaa xayiraadahaas - taasoo la micno ah inaan fursad badan u hayno bukaannadeena daryeelka iyo taxaddarka ay mudan yihiin.
Waxaan ku laabaneynaa qaabkii aan ugu soo dhaweynay bukaanada daryeelka ilmo iska soo ridka sano: hal booqasho. FCHC waxay u adeegaysay bukaanada Waqooyiga Virginia ilaa iyo 2002 - waana awoodnay inaan sidaas yeelno si badbaado leh oo xilkasnimo leh booqasho keliya. Laga bilaabo 1da Luulyo bukaanada ma sii jiri doonaan 24 saac oo sugitaan ah inta udhaxeysa booqashooyinka Xarunteena. Tani waxay ka faa'iideysanaysaa bukaannadeena iyadoo la ilaalinayo waqti iyo ilo. Micnaheedu waxa weeye inaadan sii wadin maalin shaqo oo dheeri ah. Ama si aad u hesho gaadiid ku taga Xarunteena maalin dheeraad ah. Ama si loo ilaaliyo xanaanada caruurta maalintaas dheeriga ah. Tani waxay gacan ka geysaneysaa in daryeelka ilmo iska soo rididdu u sahlanaato kuwa doorta.
Ultrasounds wuxuu had iyo jeer ahaa qayb ka mid ah daryeelka bukaanka - laakiin hadda waxay noqon kartaa go'aan lagu gaaro keliya bukaanka iyo daryeel bixiyaha. Go'aanka waxa u fiican bukaanka mar dambe ma amri doono gobolka; taas bedelkeeda, waxay ku lug yeelan doontaa wadahadal dhexmara bukaanada iyo dhakhtarkooda oo u oggolaanaya xaaladaha xaalad ahaan xaalad ahaan. Waxaan ku taageereynaa bukaankeena inay yeeshaan xakameyn iyo ogolaansho dheeraad ah oo ku saabsan jirkooda.
Waxaan ka shaqeyneynaa yareynta waqtiga bukaannadu u baahan yihiin inay ku jiraan xarunteenna. Fursado badan oo lagu dhammaystiro waraaqaha qaadashada iyo xulashada macluumaadka ku saabsan daryeelka ilmo iska soo rididdooda khadka tooska ah, bukaanku waxay jadwal u sameyn karaan ballantooda waxayna isu diyaarin karaan inta lagu jiro saacadaha ka baxsan guriga halkii ay sugi lahaayeen inta la shaqeynayo inta ay ku sugayaan hoolkayaga. Gaar ahaan xilligan COVID waxaan raadineynaa inaan bukaan socodka ka dhigno mid caafimaad qaba, aamin ah oo dabacsan intii suurtagal ah maadaama aan raaceyno tilmaamaheena kala fogaynta jireed ee xaruntayada.
© 2021 Xarunta Daryeelka Caafimaadka Kaniisadda Falls. Lagu abuuray bilaash iyadoo la adeegsanayo WordPress iyo lugeyana-shimbir